ISTICMAALKA UJEEDDADA 'StressStep® FOB Rapid Test Strip (Feces)' waa tallaal degdeg ah oo muuqaal ah oo lagu ogaanayo soo-saarista tayada leh ee hemoglobin bini-aadamka ee tijaabooyinka saxarada aadanaha. Qalabkan waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo gargaar ahaan baaritaanka cudurada caloosha hoose ee hooseeya (gi). Hordhac Kansarka malawadka waa mid ka mid ah kansarada ugu badan ee la ogaado waana sababta ugu weyn ee keenta dhimashada kansarka Mareykanka. Baaritaanka kansarka mindhicirka malawadka waxaa laga yaabaa inay kordhiso ogaanshaha kansarka ...
Xalka wasakhaynta fungaaga
FungusClearTMXalka wasakhaynta Fungal fluorescence waxaa loo adeegsadaa si dhakhso leh Aqoonsiga infekshannada kala duwan ee fungal ee tijaabooyinka caafimaad ee aadanaha ee cusub ama la qaboojiyey, paraffin ama glycol methacrylate unugyada la galiyay. Tijaabooyinka caadiga ah waxaa ka mid ah xoqista, ciddiyaha iyo timaha maqaarka sida tinea cruris, manuel and pedis, tinea unguium, tinea capitis, tinea versicolor. Sidoo kale waxaa ka mid ah xaakada, qanjidhada 'bronchoalveolar lavage' (BAL), bronchial wash, iyo unugyada ka soo baxa unugyada bukaanjiifka infekshanka fungal.
ISTICMAALKA ISTICMAALKA Tijaabada 'StrongStep® Procalcitonin Test' waa baaritaan dhaqso-difaac-chromatographic ah oo loogu talagalay ogaanshaha nambarka qiyaasta ee Procalcitonin ee ku jira serum-ka ama plasma-ka dadka. Waxaa loo adeegsadaa baaritaanka iyo xakameynta daaweynta daran, infekshinka bakteeriyada iyo sepsis. Hordhac Procalcitonin (PCT) waa borotiin yar oo ka kooban 116 haraaga amino acid leh culeys molikal ah oo qiyaastii ah 13 kDa oo markii ugu horeysay lagu sharaxay Moullec et al. sanadkii 1984. PCT waxaa si caadi ah loogu soo saaraa C-cel ...
Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah, H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Qalabka Coronavirus Antigen Test, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test, Coronavirus ee Tijaabada Covid-19,